Iindaba - Iziphumo zezibane zezityalo ze-LED ekukhuleni kwezithole?
Iziphumo zezibane zezityalo ze-LED ekukhuleni kwezithole?
Umgangatho wokukhanya ulungelelaniswe ngumgaqo ochanekileyo wesibane somthombo omtsha wokukhanya kwesibane sokukhula kwesityalo se-LED, kwaye iitumato kwindawo leyo zihlala zincediswa kukukhanya, kunye nefuthe lomgangatho wokukhanya okwahlukileyo kwisibane se-LED sokukhulisa ukukhanya ekukhuleni. kwezithole zemifuno kufundwa. Iziphumo zokwenyani zibonise ukuba ukukhanya okubomvu kwe-LED kunye nokubomvu kunye nokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kunefuthe elibonakalayo kwizikhombisi zokukhula kwezithole, kunye nobungqindilili besiqu, ubunzima obomileyo obomileyo kunye nesalathiso esomeleleyo sembewu ziphezulu kakhulu kunezo zetumato ngaphandle konyango olongezelelekileyo. Ukukhanya okubomvu okanye ukukhanya okumthubi kuyonyusa kakhulu i-chlorophyll kunye nomxholo we-carotenoid kwitumato yase-Israeli yaseHongfeng; Ukukhanya okubomvu okanye ukukhanya okubomvu okwesibhakabhaka kuyonyusa kakhulu umxholo weswekile we-tomato. Ke ngoko, ukongeza ukukhanya okubomvu okanye obomvu nohlaza okwesibhakabhaka kwinqanaba lezithole kungakhulisa ukukhula kwezithole zetumato kwaye kuluncedo ekulimeni izithole ezomeleleyo, kodwa kufuneka zisekwe kubuchule bokuxhasa ukukhanya kunye neebenchmark.
Kwiindawo ezininzi zokulima izibonelelo, izithole zemifuno ebusika nasentwasahlobo ziphantsi kobushushu obuphantsi kunye nokukhanya okubuthathaka. Ubungqina obubandayo kunye ne-thermal insulation amanyathelo anciphisile ukukhanya kokukhanya, atshintshe ukukhanya, achaphazela ukukhula okunempilo kwezithole, kwaye achaphazele ngokuthe ngqo imveliso kunye nomgangatho wemveliso. Izibane zezityalo ze-LED zinezibonelelo ezibalaseleyo ezinje ngomgangatho wokukhanya ococekileyo, ukukhanya okuphezulu kokukhanya, iintlobo ze-wavelength ezityebileyo, ukulungelelaniswa kwamandla okukhanya okufanelekileyo, kunye nokukhuselwa kwendalo kunye nokugcina amandla Luhlobo olutsha lomthombo wokukhanya kwe-LED othatha indawo yezibane ze-fluorescent kwaye usetyenziselwa ukulima izityalo. Kwiminyaka yakutshanje, ukusetyenziswa kobume bendalo kunye nokusindisa umbane kwezibane ze-LED kwitekhnoloji yokulawula imeko-bume yokukhanya ukukhuthaza ukukhula kwezityalo kunye nophuhliso kuye kwatsala umdla. Abaphengululi bamanye amazwe bafumene kuphando ukuba i-monochromatic LED okanye umgaqo wokukhanya komgangatho wokukhanya we-LED uneziphumo ezahlukeneyo kwi-morphogenesis kunye nefotosinthesisi yesipinatshi, iradish, iletisi, isweet beet, ipepile, i-perilla kunye nezinye izityalo, ezinokuphucula ukusebenza kwefotosinthesis kunye nokukhuthaza ukukhula. Kwaye injongo yokulawula i-morphology. Abanye abaphengululi basekhaya bafundile ifuthe lomgangatho wokukhanya kwe-LED ekukhuleni kweekomkomere, iitumato, iipepile ezimibalabala, iistrawberry, rapeseed kunye nezinye izityalo, kwaye baqinisekisa iziphumo ezikhethekileyo zomgangatho wokukhanya ekukhuleni kwezithole zezityalo, kodwa ngenxa yokuba amalinge ikakhulu sebenzisa imithombo eqhelekileyo yokukhanya kombane okanye izihluzi zokukhanya, njl. amanyathelo anokusebenziseka ukufumana ukukhanya, kwaye akunakwenzeka ukuba umodareyithisi kunye nokuchaneka ngokuchanekileyo kokuhanjiswa kwamandla.
Utamatisi lubalulekile kwimifuno kwilizwe lam. Utshintsho kwimeko yokukhanya kwiziko zinempembelelo enkulu ekukhuleni nasekukhuleni kwezithole zabo. Ukusetyenziswa kwee-LED ukulawula ngokuchanekileyo ubungakanani bokukhanya kunye nobungakanani bokukhanya, kwaye uthelekise iziphumo zokukhanya okwahlukileyo komgangatho wokukhanya ekukhuleni kwezithole zetumato, ijolise ekunikezeleni ngoncedo kulawulo olufanelekileyo lobume bokukhanya kwezixhobo zemifuno.
Izinto zokwenziwa kovavanyo yayiziintlobo ezimbini zetumato "I-Dutch Red Powder" kunye ne "Israel Hongfeng".
Unyango ngalunye luxhotyiswe ngezibane zokukhulisa izityalo ezi-6 ze-LED, kunye nefilimu ebonakalayo phakathi konyango ngalunye lodwa. Yongeza ukukhanya ngeeyure ezi-4 yonke imihla, ixesha ngu-6: 00-8: 00 kunye no-16: 00-18: 00. Lungisa umgama phakathi kokukhanya kwe-LED kunye nesityalo ukuze ukuphakama okuthe nkqo kokukhanya okuvela emhlabeni kube ngama-50 ukuya kwi-70 cm. Ukuphakama kwesityalo kunye nobude beengcambu kulinganiswa ngerula, ubukhulu besiqu balinganiswa nge-vernier caliper, kunye nobungqingqwa besilinganisi balinganiswa kwisiseko sesiqu. Ngexesha lokumiselwa, ukuthathwa kweesampulu ngokungakhethiyo kwamkelwa kwiisampulu zezityalo zezithole zeentlobo ezahlukeneyo, nezityalo ezili-10 ezotywe ixesha ngalinye. Isalathiso sezithole esisempilweni sabalwa ngokwendlela kaZhang Zhenxian et al. (Isalathiso esomeleleyo sembewu = ubukhulu besikhondo / ukuphakama kwesityalo x ubunzima bezityalo zonke ezomileyo); I-chlorophyll yagqitywa ngokukhutshwa nge-80% ye-acetone; amandla engcambu amiselwa ngendlela ye-TYC; Isiqulatho seswekile esinyibilikayo sagqitywa yi-anthrone colorimetry Determination.
Iziphumo zomgangatho wokukhanya ohlukileyo kwizalathiso ze-morphological zezithole zetumato, ngaphandle kokukhanya okuluhlaza, isalathiso esomeleleyo sembewu yetumato "Israel Hongfeng" izithole zaziphezulu kakhulu kunolawulo, iodolo ibomvu kwaye iluhlaza okwesibhakabhaka> ukukhanya okubomvu> ukukhanya okuphuzi> ukukhanya okwesibhakabhaka; lonke unyango olukumgangatho opholileyo Izalathio ezitsha nezomileyo zobunzima bezolawulo beziphezulu kakhulu kunaleyo yolawulo, kwaye unyango olukhanyayo olubomvu noluhlaza okwesibhakabhaka lwafikelela kwixabiso elikhulu; ngaphandle kokukhanya okuluhlaza kunye nokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka, ubukhulu besikhondo solunye unyango olusemgangathweni ophezulu lwaluphakame kakhulu kunolo lolawulo, lwalandelwa kukukhanya okubomvu> ukukhanya okubomvu nokuhlaza okwesibhakabhaka> ukuKhanya okuMthubi.
Utamatisi "umgubo obomvu waseDatshi" usabela ngendlela eyahlukileyo kunyango olusemgangathweni. Ngaphandle kokukhanya okuluhlaza, isalathi esisempilweni sesithole seetamati "Izityalo ezibomvu zeDatshi" zaziphezulu kakhulu kunolawulo, zilandelwa kukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka> ukukhanya okubomvu okwesibhakabhaka> ukukhanya okubomvu> ukukhanya okumthubi; Isalathiso sobunzima esitsha nesomileyo sonyango olukumgangatho ophakamileyo sasiphezulu kakhulu kuneso solawulo. Unyango lokukhanya okubomvu lufikelele kwixabiso elikhulu; ubukhulu besikhondo salo lonke unyango olukumgangatho ophakamileyo lwaluphakame kakhulu kunolo lolawulo, kwaye iodolo yayikukukhanya okubomvu> ukukhanya okumthubi> ukukhanya okubomvu nokuhlaza okwesibhakabhaka> ukukhanya okuluhlaza> ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka. Uhlalutyo olupheleleyo lweempawu ezahlukeneyo, ukongezwa kokukhanya okubomvu, okuluhlaza okwesibhakabhaka kunye nobomvu kunefuthe elibonakalayo ekukhuleni kweentlobo ezimbini zetumato. Ubungqongqo besiqu, ukutsha, ubunzima obomileyo kunye nesalathiso esomeleleyo sezithole ziphezulu kakhulu kunezolawulo. Kodwa kukho umahluko omncinci phakathi kweentlobo. Utamatisi "u-Israel Hongfeng" phantsi konyango olubomvu noluhlaza okwesibhakabhaka, ubunzima bayo obutsha, ubunzima obomileyo kunye nesalathiso esomeleleyo sezithole konke kufikelele kumaxabiso amakhulu, kwaye kukho umahluko obonakalayo kolunye unyango; i-tomato "I-Dutch Powder ebomvu" phantsi kwonyango olukhanyayo obomvu. Ukuphakama kwesityalo, ubukhulu besikhondo, ubude beengcambu, ubunzima obutsha, kunye nobunzima obomileyo konke kwafikelela kumaxabiso amakhulu, kwaye kukho umahluko omkhulu kwezinye iindlela zonyango.
Ngaphantsi kwesibane esibomvu, ukuphakama kwezityalo zezithole zetumato kwakuphezulu kakhulu kunolawulo. Ukukhanya okubomvu kudlala indima ebalulekileyo ekukhuthazeni ubude be-stem, ukwanda kwenqanaba le-photosynthesis kunye nokuqokelelwa kwezinto ezomileyo. Ukongeza, ukuxhasa ukukhanya okubomvu kunganyusa kakhulu ubude beengcambu zetumato "umgubo obomvu waseDatshi", ofanayo kufundo lweekomkomere, ebonisa ukuba ukukhanya okubomvu kungakhuthaza nendima yeengcambu zeenwele. Ngaphantsi kokongezwa kokukhanya okubomvu nokuhlaza okwesibhakabhaka, isalathiso esomeleleyo sezithole zezithole ezintathu siphezulu kakhulu kunolawulo.
Ukudityaniswa kombala obomvu noluhlaza okwesibhakabhaka we-LED kunefuthe elihle ekukhuleni nasekuphuhlisweni kwezityalo, okungcono kunonyango olukhanyayo lwe-monochromatic. Iziphumo ze-LED ebomvu ekukhuleni kwesipinatshi azicacanga, kwaye isalathiso sokukhula kwesimo sesipinatshi siphuculwe kakhulu emva kongeze i-LED eluhlaza okwesibhakabhaka. Ukuqokelelwa kweswekile ye-beet ekhule phantsi kokukhanya okudityanisiweyo kwebala elibomvu noluhlaza okwesibhakabhaka i-spectrum enkulu, ukuqokelelwa kweengcambu zeenwele kubalulekile, kwaye iswekile ephezulu kunye nokuqokelelwa kwesitatshi kuveliswa kwingcambu yeenwele. Olunye uphononongo lukholelwa ekubeni indibaniselwano yezibane ezibomvu neziluhlaza ze-LED zinokunyusa isantya se-photosynthetic yokuphucula ukukhula kwezityalo kunye nophuhliso kuba ukuhanjiswa kwamandla okubonisa ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka nokuluhlaza kuyahambelana nokubonakaliswa kokufakwa kwe-chlorophyll. Ukongeza, ukongezwa kokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kunefuthe elihle kubunzima obutsha, ubunzima obomileyo kunye nesalathiso esomeleleyo sezithole zezithole zetumato. Ukukhanya kwemitha eluhlaza okwesibhakabhaka kwinqanaba lezithole kungakhuthaza ukukhula kwezithole zetumato, okulungeleyo ukulinywa kwezithole eziqinileyo. Olu pho nonongo lufumene ukuba ukuxhaswa ngokukhanya okwesibhakabhaka kwandisa kakhulu i-chlorophyll kunye ne-carotenoids umxholo wetamatato "Israel Hongfeng". Iziphumo zophononongo zibonise ukuba ukukhanya okuluhlaza kukhuthaza ukukhula ngokukhawuleza kwezithole ze-Arabidopsis chlorosis, kwaye kukholelwa ukuba isibane esitsha sokukhanya esenziwe kukukhanya okuluhlaza sikhuthaza ubude besiqu kwaye sithintela ukukhula kokuthintela.
Izigqibo ezininzi ezifunyenwe kolu vavanyo ziyafana okanye ziyafana nezo zexesha langaphambili, eqinisekisa imeko ekhethekileyo ye-LED ebonakalayo ekukhuleni kwezityalo. Iziphumo zobulunga obukhanyayo kwi-morphogenesis yesondlo kunye neempawu zomzimba wezithole zezityalo zibalulekile, ezibalulekileyo kwimveliso. Sebenzisa umgangatho owongezelelekileyo wokukhanya ukuhlakulela izithole ezomeleleyo ukubonelela ngesiseko sethiyori kunye neeparitha zobugcisa ezinokwenzeka. Nangona kunjalo, ukukhanya okongezelelweyo kwe-LED iseyinkqubo enzima kakhulu. Kwixesha elizayo, kuyimfuneko ukuphonononga ngendlela eyiyo iziphumo kunye neendlela zokukhanya kwendalo ezinje ngamabala ahlukeneyo (umgangatho wokukhanya) amandla (ukukhanya kobuninzi bobungakanani) ukusasazwa kunye nexesha lokufota ekukhuleni kwezithole zezityalo, ukulungiselela ukulima izithole zeziko . Ummiselo osengqiqweni wobume beZhongguang ubonelela ngemilinganiselo.
Ixesha Post: Jul-28-2020